ASA UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ W1025 - China Hubei Shengyu Building Materials
Shengyu UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ, na-mere nke uPVC, kenkowaputa imecha na ASA resin. Ọ na-anọgide ufọk ufene ke agba na anụ ahụ Njirimara n'okpuru ultra-violet radieshon, dampness, okpomọkụ, chillness na mmetụta. Ọ na ọtụtụ-eji ogbako, nkwakọba, ụlọ dị iche iche na-adịgide adịgide n'elu ụlọ na ọtụtụ afọ ngwa akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ mba ndị mepere emepe. Shengyu UPVC ụlọ akwụkwọ bụ a ọhụrụ nhọrọ maka roofing na mgbidi cladding ewu. Ọ bụ siri ike, inogide na agba na fechaa, mma tha ...
FOB Price: 2.99-7.75 / square mita
Shengyu UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ, na-mere nke uPVC, kenkowaputa imecha na ASA resin. Ọ na-anọgide ufọk ufene ke agba na anụ ahụ Njirimara n'okpuru ultra-violet radieshon, dampness, okpomọkụ, chillness na mmetụta. Ọ na ọtụtụ-eji ogbako, nkwakọba, ụlọ dị iche iche na-adịgide adịgide n'elu ụlọ na ọtụtụ afọ ngwa akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ mba ndị mepere emepe.
Shengyu UPVC ụlọ akwụkwọ bụ a ọhụrụ nhọrọ maka roofing na mgbidi cladding ewu. Ọ bụ siri ike, inogide na agba na fechaa, mma karịa metal na galvanized mpempe akwụkwọ. More mkpa, ọ ga-ajari dị arọ ụlọ ọrụ ogige.
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm ka choro 3.0-6.0KG / ㎡ kenkowaputa White, Blue, Gray, Terracotta, Red
Dị ka top oyi akwa ihe onwunwe, ASA engineering resin bụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na n'èzí ojiji. Ọbụna gụrụ ultra-violet radieshon, dampness, okpomọkụ, chillness na mmetụta, ngwaahịa-anọgide na kwụsie ike nke na agba na anụ ahụ Njirimara. Ule ẹkenịmde ke ịka nká Test Center nke Arizona na Florida na-egosi na bụ ihe na-erughị △ E 5 n'ime 10 afọ.
Shengyu plastic ụlọ akwụkwọ na-aga 6,000h merela agadi ule site China National Test Center maka Chemical Building Materials na ya n'ihi △ E <4.
Shengyu UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ, okpomọkụ ya conduction modulus bụ 0,325 W / m. K, nke tụnyere 1/3 na nke 10mm ọkpụrụkpụ ụrọ Ibé akwụkwọ, 1/5 na nke 10mm ọkpụrụkpụ cement Ibé akwụkwọ, 1/2000 na nke 5mm ọkpụrụkpụ agba ígwè Ibé akwụkwọ.
Shengyu UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ, ya elu oyi akwa (ASA resin) nwere oké arụmọrụ mgbochi corrosion ule, nke na-agaghị ebelata site ozize nke mmiri ozuzo na snow. ASA resin bụ eguzogide ọgwụ ọtụtụ ọgwụ ndị dị otú ahụ dị ka acid, alkaline, nnu, wdg Ya mere, o kwesịrị ekwesị ka n'èzí ngwa costal mpaghara na oké njọ nnu foogu corrosion na arọ ikuku ndu.
Shengyu UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ nwere ike ike maka oké amị. The ule, ekenịmde Shanghai Municipal Building Ihe akụrụngwa Quality Supervision na Test Station, na-egosi na ọ dịghị mgbape na ọnọdụ nke 800mm akwado na-adịru na 150kg etinyere ibu.
Otu ọkọlọtọ mpempe ụlọ akwụkwọ ji 1.87-6.0kg kwa square mita.
Previous: FRP daylighting mpempe akwụkwọ WW1025
Next: UPVC mgbidi panel T1110
1.UPVC (ASA) rooing Ibé akwụkwọ na-na ọdabara ka ụlọ pitches si 8 Celsius 22 Celsius, na purlin adịru adịghị karịa 800mm.
T980 ụlọ akwụkwọ na-na ọdabara ka ụlọ pitches 6 Celsius 22 Celsius, na purlin adịru adịghị karịa 1200mm.
2.Thermal egbochi ihe ihe ike ga-eji na n'okpuru mpempe akwụkwọ.
Biko jiri a n'ọkwá ma ọ bụ ndị ọzọ chọrọ ụlọ ọrụ n'oge echichi.
Biko adịghị eguzo n'etiti abụọ purlins n'oge echichi.
N'ihi na a gabled n'elu ụlọ, Ibé akwụkwọ na akụkụ nke ọ bụla ga-arụnyere na n'otu oge ahụ na riiji tile.
Echichi na-agaghị na-atụ aro ka a rụrụ na ọnọdụ okpomọkụ n'okpuru -5 ℃.
Wụnye site ọkachamara roofers iji hụ na àgwà nke echichi.
kwụ yitewere site onye-efegharị efegharị na vetikal yitewere dịghị ihe na-erughị 100mm.
The gbamgbam na mgbidi cladding nwere ike ofu site ọnọ nko ma ọ bụ onwe-na ịme ọpịpị kposara.
N'ihi na ọ bụla mpempe akwụkwọ, abụọ tent nke nko ga-dịrị kwesịrị ekwesị na onye purlin, agafe na-efegharị efegharị crest.
Ọ bụla ife crest na vetikal overlapping ebe a ga-ofu aka purlin site nko, na nwee ume usoro kwesịrị iwere na ebe arọ ifufe.
N'ihi na mgbidi claddings, na overlaps n'etiti abụọ purlins ga-ofu site abụọ rivets.
Rubber cushions ga-eji n'okpuru mpempe akwụkwọ ma ọ bụrụ na gwara site nko, na ịghasa mkpụrụ ga-tightened ọma, adịghị n'elu-uko.
6.Roofing Ibé akwụkwọ ga-ebipụ site toothless hụrụ.
Iji eletriki malite ịgba akuakuzinwo oghere.
Biko jide n'aka na Ibé akwụkwọ e tinyere n'ụzọ ziri ezi na purlins tupu egwu oghere.
Oghere n'obosara kwesịrị 2mm wider karịa nke nko mandrel.
Biko jiri ịkwanyere mama mechie maka mis-gbapuru oghere.
8.Storage na Ijikwa
The Ibé akwụkwọ ga-echekwara na a ụgbọelu anụ, nke kwesịrị ogologo karịa mpempe akwụkwọ.
Shorter Ibé akwụkwọ ga-etinye na ogologo Ibé akwụkwọ izere deformation.
Ekwela tojupụtara profaịlị dị iche iche nke Ibé akwụkwọ ọnụ.
Biko echekwa Ibé akwụkwọ na ndò.
Zere na-agbasa, rubbing ma ọ bụ scratching n'elu n'oge na-ejizi.
3 Layer Upvc ụlọ taịl
Carbon Fiber Upvc ụlọ mpempe akwụkwọ
Clear corrugated Plastic gbamgbam
Mejupụtara Asa ntekwasa Upvc ụlọ mpempe akwụkwọ
Corruagted roofing mpempe akwụkwọ
Corrugated faiba glaasi roofing
corrugated Plastic Clear Ibé akwụkwọ
corrugated Plastic gbamgbam N'ihi griin haus
corrugated ịkwanyere Ihe roofing mpempe akwụkwọ
Corrugated ụlọ mpempe akwụkwọ
Corrugated gbamgbam Nha
Corrugated Upvc gbamgbam
Fiber corrugated gbamgbam
Nrụgide oru corrugated Plastic gbamgbam
High Ike Upvc ụlọ mpempe akwụkwọ
Mkpuchi Upvc ụlọ mpempe akwụkwọ
Kerala Clear corrugated Plastic ụlọ Ibé akwụkwọ
Large corrugated Plastic Ibé akwụkwọ
Long adịru Agba ntekwasa corrugated roofing mpempe akwụkwọ
Multi n'ígwé Upvc roofing Ngidi
Plastic corrugated mpempe akwụkwọ Price
Plastic Upvc ụlọ mpempe akwụkwọ
Ịkwanyere Ma Upvc Wave roofing shingles Ibé akwụkwọ
Ịkwanyere corrugated Plastic Ibé akwụkwọ
ịkwanyere corrugated roofing
ịkwanyere corrugated gbamgbam
Ịkwanyere / Upvc ụlọ Ibé akwụkwọ
Raw Ihe N'ihi corrugated roofing mpempe akwụkwọ
Sịntetik resin Upvc Plastic roofing mpempe akwụkwọ
Trapezoidal Upvc roofing mpempe akwụkwọ
Upvc Plastic roofing mpempe akwụkwọ
Upvc ụlọ mpempe akwụkwọ
Upvc ụlọ Sheetcorrugated roofing mpempe akwụkwọ
Upvc ụlọ Ngidi
Upvc roofing mpempe akwụkwọ
Ji corrugated ụlọ mpempe akwụkwọ
White corrugated roofing mpempe akwụkwọ